Baarlamanka Soomaaliya Oo Maanta Cod U Qaadaya Soo Celinta Soo Celinta Wasiiradii Saacid – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Baralamanka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya fadhi cod loogu qaadayo mowshin ka dhanka ah in wasiiradii Xukumaddii hore ay ka mid noqondaan xukuumadda cusub iyo inkale.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo ka mid ah xogheynta Baarlamanka ayaa sheegay in ajandaha kulanka Baarlamanka ee maanta uu noqon doono u codeynta Mowshinkii looga dooday kulankii 55 aad ee qabsoomay 12 Janayo 2014, kaas oo ku saabsanaa in wasiiradii hore ee xukuumadii Saacid ay ka mid noqon karaan golaha wasiirada cusub ee la filayo in dhawaan lagu dhawaaqo.
“Marka aan soo koobo mowshinka nuxurkiisa waxaa ka mid ahaa in xukuumadda cusub aysan ka mid noqon ama ka mid noqdaan wasiiradii hore ee ka midka ahaa xukuumaddii kalsoonida lagala laabtay, waxaana la filayaa in maanta codka loo qaado mowshinkaasi’’ ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Cumar.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada soo gudbiyay mooshinkan ee doonaya in aan Xukuumada cusub lagu soo darin Wasiiradii hore ayaa soo daliishanaya in Wasiiradii Xukuumadii Saacid ay iyagu fashilmeen, ayna iyaga qeyb ka ahaayeen ololihii lagu riday Ra’iisul Wasaarihii hore Saacid.
Xildhibaanada qaar ayaa aaminsan in wasiiradii hore ay ka mid ahaayeen ilmo aabahood ka weyn, islamarkaana aanay jirin sabab ay dib ugu soo laabtaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu doonayo in qaar ka mid ah xubno isaga ku dhow oo ka mid ah wasiiradii Saacid ay ka mid noqdaan xukuumadda cusub ee C/weli Sheekh Axmed.